Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana India » Ireo mpizahatany indiana dia heverina ho tena tadiavina
Airlines • Airport • Aviation • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Cruising • Hospitality Industry • Hotels & Resorts • Vaovao Mafana India • Vaovao lafo vidy • fivoriana • Vaovao • People • Fitsangatsanganana an-dalamby • fanorenana • Resorts • tompon'andraikitra • fiantsenana • Tourism • Fitaterana • Travel Wire News • malaza ankehitriny
Ireo mpizahatany indiana dia heverina ho tena tadiavina.
Ny fitomboana ao anatin'ny toekaren'i India dia handray anjara mivantana amin'ny fampisondrotana ny saranga antonony, ka hitombo ny harena sy ny fidiram-bola azo ampiasaina mandritra ny taona maro ho avy.
Miroborobo amin'ny ankapobeny ny fivoaran'ny fizahantany any amin'ny toekarena an-dalam-pandrosoana, ary toa mamirapiratra ny hoavin'i India.
Ny fanatsarana ny fotodrafitrasa ao India sy ny fampivoarana ny tsenan'ny zotram-piaramanidina mora vidy dia midika fa sady azo idirana ny fandehanana mivoaka any ivelany.
Ny 56%-n'ny Karana dia nilaza fa ny 'fahavitrihana' sy ny 'fidirana' no tena dinihina rehefa mividy fialantsasatra.
Mpizahatany indianina dia ho anisan'ireo mpivahiny iriny indrindra, noho ny fitomboan'ny toekaren'i India, ny mponina tanora ary ny saranga antonony miakatra, hoy ny mpandinika ny indostrian'ny fizahantany. Ny manam-pahaizana dia nanamarika fa ny firenena dia vinavinaina hahatratra ny haavon'ny firaketana fitsangatsanganana 29 tapitrisa amin'ny 2025 - fomba fijery manjavozavo raha jerena ny tebiteby amin'ny COVID-19.
Talohan'ny areti-mifindra, India dia iray amin'ireo tsenan'ny fizahantany manan-danja indrindra sy tadiavina eran-tany, ary lasibatra lehibe ho an'ireo mpilalao lehibe toa ny VisitBritain ary Fizahan-tany Aostralia.
Na dia nampijaly mafy ny toekaren'ny firenena sy ny indostrian'ny fizahantany aza ny krizy COVID-19, Indian mpandeha andrasana ho vonona handeha indray.
Mbola hiorina amin'ny fahombiazany ny toekaren'i India, taorian'ny fahasahiranana voalohany tamin'ny taona 2020. Ny vinavina ankehitriny dia mampiseho fa ny harin-karena nasionalin'i India dia hahatratra $4 trillion, 50% ambony noho ny haavon'ny 2021, araka ny angona farany.
Ny fampivoarana ny fizahantany dia mazàna miroborobo amin'ny toe-karena an-dalam-pandrosoana, ary toa mamirapiratra ny hoavin'i India - raha toa ka afaka misoroka ny fihanaky ny COVID-19 sy ny fanakatonana manaraka izany. Manome fahafahana tena tsara ho an'ny mpivarotra toerana, izay afaka manararaotra ny fitomboan'ny mponina ao amin'ny firenena, ahitana ny Gen Z sy ny arivo taona (manodidina ny 51%). Ireo taranaka ireo dia mirona handeha. Fanampin'izay, ny fanatsarana ny fotodrafitrasa ao India sy ny fampivoarana ny tsenan'ny zotram-piaramanidina mora vidy dia midika fa sady azo idirana ny fandehanana mivoaka any ivelany.
Araka ny fanadihadiana natao vao haingana, ny 56% amin'ny Indiana dia nilaza fa ny 'fahavitrihana' sy ny 'fidirana' no zava-dehibe amin'ny fividianana fialantsasatra. Izany dia manasongadina fa ny vahaolana fitsangatsanganana tsotra sy mora vidy no lalana mandroso.
Ny fitomboan'ny fampiasam-bola any India amin'ny zotram-piaramanidina tetibola, ary koa ny fanatsarana ny fotodrafitrasa amin'ny seranam-piaramanidina, dia midika fifandraisana tsara kokoa avy amin'ny seranam-piaramanidina isam-paritra sy lehibe. Noho izany, ny fitsangatsanganana iraisam-pirenena dia ho mahitsy sy mora kokoa Indian mpandeha. Tena ilaina amin'ny fahombiazan'i India amin'ny vanim-potoanan'ny areti-mifindra izany.
Efa nitombo be ny indostrian'ny zotram-piaramanidina India nandritra ny folo taona lasa niaraka tamin'ny toekareny. Tamin'ny taona 2016, nihoatra ny mpitatitra serivisy feno izy tamin'ny isan'ny seza mpandeha namidy, ary mitentina 51% amin'ny fifamoivoizana mpandeha rehetra any India hatramin'ny 2021.